सडक दुर्घटनाका कारक चालकमात्र हुन ? - Tanahun Awaj
Home विचार/दृष्टिकोण	सडक दुर्घटनाका कारक चालकमात्र हुन ?
सडक दुर्घटनाका कारक चालकमात्र हुन ?
by Tanahu Awaj 29th May 2019
29th May 2019 214 views
हामी हरेक दिन जसो सवारी दुर्घटनाका खवरहरु सुनिरहन्छौं । कुनै आफै भएका त कुनै दुइवटा सवारी साधन परस्पर ठोकिँदा भएका दुर्घटना । सांघुरो, घुम्ती धेरै भएको र उकालो सडक भएका कारण हाम्रोमा भएका सडक र दुर्घटनाका बीचमा गहिरो सम्बन्ध रहन्छ । नेपालका सडकमा हुने सवारी दुर्घटनाहरुलाई हामी अक्सर सामान्य रुपमा लिन्छौं । दुर्घटना भएपछि कारणका बारेमा कुरा गर्दा हामी सबैको एउटै र तयारी उत्तर हुन्छ, चालकको लापरवाही । अनि थप भनि दिन्छौं चालकले रक्सी खाएर सवारी चलायो, निदायो वा सहचालकले सवारी चलायो । दुर्घटनाका अन्य कारणहरु पनि हुन सक्छन् भनेर खोजिनीति गर्ने तर्फ हाम्रो ध्यान जाँदैन जबसम्म त्यो दुर्घटनाले अकल्पनिय क्षति पु–याउँदैन । सबैजसो हामीले भने झै चालकको असावधानीले मात्रै सडक दुर्घटना हुने गर्छन त ? यसबारे अब छलफल र बहस गर्नु पर्ने बेला भएको छ ।
पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने डुम्रे दमौली सडक खण्डको घाँसीकुवादेखि करीब १.५ किमी पूर्वतर्फ साविक कल्चर भिलेज रेष्टुरण्ट हाल घाँसीकुवा रेष्टुरण्ट एण्ड बारको नजिकै एउटा मोड छ, जुन सडक दुर्घटनाका हिसाबले अत्यन्तै जोखिम मोडहरु मध्ये पर्छ । औषत रुपमा प्रतिमहिना दुइ देखि तीनवटा सवारी दुर्घटना यो मोडमा हुने गर्दछन् । यस हिसाबले हेर्दा यो मोड पृथ्वी राजमार्गमा धेरै दुर्घटना हुने मोडमा पर्छ । गत हप्ता मात्रै यही मोडमा दुई दिनको अन्तरालमा दुइवटा मालबाहक सवारी दुर्घटनामा परे । के हप्तै पिच्छे हुने यी दुर्घटनाहरु चालककै लापरवाही कारणले मात्रै भएका हुन ? या अरु पनि कारण छन् । यो विषयमा बहस हुनु र सम्वन्धित निकायको ध्यान जानु यो पंक्तिकारलाई आवश्यक लागेको छ । यहाँ प्रस्तुत विचार मेरा निजी बुझाइहरु हुन तर अब बहसको विषय बन्नु पर्छ भन्ने ठानेको छु ।
सवारी दुर्घटनाका धेरैकारणहरु हुन सकछन् । सवारीमा आएको खराबी, चालकको लापरवाही, सडकको अवस्था, ट्रफिक प्रहरीको चुस्त कार्यान्वयनको अभाव तथा गाडीमा हुने ओभरलोड आदि । यो आलेखमा मैले बुझेका बुँदाहरु प्रस्तुत गर्ने जमर्काे गरेको छु । दमौली–डुम्रे यो सडक खण्डमा दमौली तथा डुम्रे दुवै ठाउँमा ट्रफिक प्रहरीको व्यवस्था रहेको छ । यसर्थ सवारी चालकले मादक पदार्थ सेवन (मापसे ) गरी सवारी चलाएर ती चेक प्वाइन्ट पार गर्नु गाह्रो कुरा हो । यद्यपि यो सडक खण्डको बीच बीचमा प्रसस्त खाजा घरहरु नभएका होइनन्, जुन मालबाहक सवारीका स्टाफकै लागि खोलिएका हुन् । यस्ता ठाउँमा चालकहरुले खाना तथा खाजा खाने र मादक पदार्थ समेत सेवन गर्ने सम्भावना नकार्न सकिन्न । तर पनि अघिल्लो चेक प्वाइन्टमा मापसेमा परिने खतरा रहने हुँदा बीचमा मापसे गर्ने हिम्मत प्राय चालकले नगर्लान । यदि सवारीमा खरावी आएकै कारणले दुर्घटना भएको हो भन्ने हो भने पनि यसमा कम सम्भावना रहन्छ किनभने कुनै पनि चालक सवारीमा खरावी आएको थाहा पाउँदा पाउँदै सोही गाडीमा सवार भएर आउँदैन । ओभर लोडकै कुरा गर्ने हो भने पनि राजमार्गमा विभिन्न स्थानमा धर्मकाँटाहरुको व्यवस्था छ, जुन छलि गर्न सम्भव छैन अर्थात ओभर लोड लिएर आउने सम्भावना रहँदैन । यदि ओभर लोड लिएर आएको भए त्यो किन र कसरी सम्भव भयो भन्ने बारेमा खोजी गर्नु आवश्य क हुन्छ ।
अब कुरा गरौं सडक संरचनाको । यस आलेखमा मैले जुन स्थानको सडकको बारेमा कुरा गर्दैछु, त्यहाँ ऋ मोड रहेको छ । ऋ मोडमा मालबाहक ट्रक तथा बसहरुमा सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स लागिरहेको हुन्छ । (सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सले पिण्डलाई केन्द्रबाट परतिर हुत्याउँछ ।) यस स्थानमा वा मोडमा भएका कुनै पनि दुर्घटनाहरु मेरो जानकारीमा रहे सम्म डुम्रे तर्फबाट आउँदा दायाँ तर्फ भएका छैनन् । सबै वायाँ तर्फ भएका छन् । (गत हप्ताकै दुर्घटनापनि जुन संगैको तस्विरमा देख्न सकिन्छ ।) यो ठाउँसम्म आई पुग्दा डुम्रे तर्फबाट आएका सवारी साधनले देउराली देखि निरन्तर ओरालो यात्रा गर िअचानक साँघुरो ऋ आकारको घुम्तीको सामना गर्नुपर्छ । आरालोमा लोड गाडीको स्पीड बढी हुने र ब्रेकले काम नगर्ने पनि हुन सक्छ । त्यो अवस्थामा अचानक घुम्ती मोड्दा सवारीमा नियन्त्रण नभई दुर्घटना हुने सम्भावना रहन्छ । (स्मरण रहोस सो स्थानमा दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र जनाउने पर्याप्त संकेतको अभाव छ ।
यदि यस्तो हो भने सडक संरचना सुरक्षित बनाउनुु सम्वनिधत निकायको जिम्मेवारी होइन र ? मर्मतका नाममा केही स्थानमा जाली लगाउनु र सडकमा रहेका खाल्डा खुल्डी पुर्नु मात्र पर्याप्त हुन्छ र ? सडक फराकिलो र कम घुम्ती युक्त बनाउनु आवश्यक होइन् ? सडक विस्तारका क्रममा कर्याै मानव वस्ती उठाउने र करौडौंका भौतिक संरचना भत्काउँदा काम गर्न सहज यस्तो खुल्ला ठाउँमा विस्तार गर्ने कुरामा किन चासो नदिइएको वा प्राथमिकतामा नराखिएको होला ? अहिले पनि यो सडम खण्डमा मर्मतको काम भइरहेको छ तर त्यो पर्याप्त छ जस्तो लाग्दैन ।
यस क्षेत्रमा भएका दुर्घटनाको कारण सडक संरचनामात्र हो भन्ने मेरो तर्क होइन । अरु पक्ष पनि त्यत्तिकै जिम्मेबार होलान । छिर्कनेदेखि ओरालो लाग्न सुरु गर्दा सवारी साधनले धेरै घुम्तीहरु पार गरेर आउँछन् तर तुलनात्मक रुपमा यो घुम्तीमा बढी दुर्घटना हुन्छ । यत्तिका ओरालोमा रहेका घुम्तीहरु कटेपछि यहिँ मात्रै धेरै दुर्घटना हुन्छ भने के हामी यो सडक संरचनामा ढुक्क भएर बस्न सक्छौं ? के यो स्थानमा चालकको लापरवाहीले मात्रै दुर्घटना भएको होला ? यो स्थानमा हुने सवारी दुर्घटना नियन्त्रण भन्दा बाहिरको क्ुरा हो त ? के यसलाई न्यूनिकरण गर्ने सम्भावना र ठोस उपाएहरु छैनन् ? के हामी सम्भावना सून्य भएका हौं ? बहस जरुरी छ ।
पैतालीस दिने सिलाई तालिम
आजको सन्दर्भमा एसइई
निर्मलाको नियती भागरथीले नभोगुन्
देवकोटाको सम्झना, दिपावलीको शुभकामना !
प्रश्न छाड्दै पत्रकारिता
सम्पादकीय म्याराथानले स्वास्थ्य र पर्यटनको अभिबृद्धी होस्